နားခိုရာ: Long time no blog
Posted by little moon at 12:40 PM
ဟယ် မမ KOM ကို မြင်ဖူးသွားပြီပေါ့... ဓါတ်ပုံရှိရင် တင်ပါဦး။
မနာလိုဘူးဟေ့။ မမကို တွေ့ဖူးသွားလို့။
အပြန် မုန့်ဝယ်ခဲ့ပါလို့ လှထုံက မှာတယ်လို့ နော်.. နော်.. ။ အရမ်းသတိရကြောင်းလဲ ပြောပေး.. :(
Within this period, I visited to your blog everyday and worried why there is no new post for long time. Looking forward to read new interesting post.
ကြီးတော်လို့ ခေါ်နေတာတောင် အားနာသွားတယ်ဗျို့ ရုပ်ရည်ရော အဆင်အပြင်အနေအထိုင်ပါ ကိုယ့်ထက် နုပျိုသေး .... :)
ဒီမှာ မြင်ချင်လွန်းလို့ တွန့်တွန့်လူးနေပြီ။
အသက်ကဘယ်လောက်လဲ၊ အရပ်က ဘယ်လောက်လဲ ... အဲ ... စပ်စုထှာနှော် .. ဟီး
မမရဲ့ ပို့စ်ကတဆင့် လာလည်တာပါ ... :D
Anonymous ချင်းသူက တစ်မူးပိုရှုနေပြန်ပြီ။